सुन्दा अचम्म लाग्छ। प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानीका रूपमा रहेको रूपन्देहीको मुख्य सहर बुटवल, भैरहवा, भलबाडीमा करोडौंको सुनचाँदी चोर्नेहरु अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा ...
प्रकाशित: २०७५-११-२१ ११:१९:२५ नरेश केसी
भैरहवा- सुन्दा अचम्म लाग्छ। प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानीका रूपमा रहेको रूपन्देहीको मुख्य सहर बुटवल, भैरहवा, भलबाडीमा करोडौंको सुनचाँदी चोर्नेहरु अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा आइतबार रूपन्देही सुनचादी व्यवसायी संघका अध्यक्ष एमबी विश्वकर्माले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष भन्दै थिए, 'सर, अहिलेसम्म रूपन्देहीका जत्ति पनि सुनचाँदी पसलमा चोरी भएको छ ती घटनाका दोषी र चोरी भएको समान फिर्ता भएको रेकर्ड छैन। के रूपन्देहीमा सुनचाँदी पसलमा चोर्ने चोरहरु कहिल्यै नसमातिने हुन् ?'
विश्वकर्माको प्रश्नले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगर अक्कमक्क भए। छेउमै भएका रूपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी हृदय थापाले उनको प्रश्नको जबाफ दिँदै भने, 'अस्ति भैरहवामा सुनचाँदी पसलमा चोर्नै चोर केही दिनमा पक्राउ पर्छ। विगतको घटनामा पनि हामी अनुसन्धान गर्छौं।' रूपन्देहीको सुरक्षित बजार मानिने बैंक रोड भैरहवामा एकाबिहानै चोरी भएको घटनाले यति बेला व्यवसायीहरुमा त्रास उत्पन्न भएको छ भने प्रहरी प्रशासनलाई सुरक्षा चुनौती थपिदिएको छ।
रूपन्देहीमा चोरीको शृंखला
गएको शुक्रबार एकाबिहानै भैरहवामा चोरी भएको हल्ला फैलियो। रूपन्देही सदरमुकाम भैरहवाको मुख्य बजार बैंकरोडमा एकाबिहानै भएको चोरीप्रति सबै आश्चर्यचकित भए। करिब १० मिनेटको अन्तरमा चोरको एक समूहले करिब ७ लाख मूल्य बराबरको गरगहना चोरेर फरार भयो।
बिहान ५ बजेर ४३ मिनेटको समयमा बैंकरोडमा रहेको बिके ज्वेलर्सको सटरको लक तोडेर भित्र छिर्ने दुई युवाको चोरीको शैली हेर्दा कुनै फिल्म हेरको जस्तै हुन्थ्यो। पसलको सिसिटिभी फुटेजको रेकर्डअनुसार चोरहरुले ५ बजेर ४३ मिनेट जाँदा भित्र पसी ५ बजेर ५३ मिनेटमा चाँदी र सुनका गहना लिएर फरार भएका छन्। करिब २४/२५ वर्षका जस्ता देखिने ती दुई युवाले एकाबिहानै पसल तोडेर भित्र पसी निर्धक्कसँग गरेको चोरी कार्यले भैरहवाको समग्र सुरक्षामा चुनौती थपिदिएको छ।
बिहानको समय अधिकांश व्यक्तिहरु मर्निङ वाकमा हुन्छन्। बिके ज्वेलर्सबाट सय मिटरको दूरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ। २० मिटरको दूरीमा नेपाली सेनाको ब्यारेक छ। पसल कुनै कुनामा छैन। धेरै टाढाबाट सहजै देख्न सकिने ठाउँमा छ। यस्तो ठाउँमा बिहानबिहानै चोरी हुनु भैरहवाको सुरक्षामा ठाडो चुनौती भएको उद्योग बाणिज्य संघ सिद्धार्थनगरका महासचिव नेत्रप्रसाद आचार्यले बताए। पसलका सञ्चालक प्रेमकुमार सेन्चुरीका अनुसार चोरले करिब ७ लाख मूल्यको सामग्री चोरेको छ।
बैंकरोड जस्तो मुख्य बजारमा चोरहरुले बिहानीपख चोरी गरेर सुरक्षा चुनौतीसमेत थपिदिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले स्वीकारेको छ। रूपन्देही प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी धर्मराज भण्डारीले भने, 'हामीले विहान ४ बजेसम्म सुरक्षा कडाइ गर्ने गथ्र्यौं तर चोरले त्यसपछिको समयमा चोरी गरेको छ। नेपाल प्रहरी यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको छ।'
२०६६ साल जेठमा बुटवलको अमरपथमा रहेको रेसुंगा सुनचाँदी पसलमा चोरी भयो। चोरले १ करोड मूल्य बराबरको सुनचाँदीका गहना चोरेर भाग्यो। पसलका सञ्चालक बाबुलाल सुनारले प्रहरी प्रशासनमा धेरैपटक हारगुहार गरे तर प्रहरीले चोर पक्रिनुको साटो उनलाई दुव्र्यवहार गर्‍यो। जसका कारण पसलमा चोरी भएको एक हप्तामै उनले मृत्यु रोज्न पुगे। बाबुलालका छोरा रबिन बराल १० वर्षअगाडिको घटना सम्झिँदै भन्छन्, 'त्यसपछि पनि हामीले चोरको आशंका गरेर प्रहरीलाई धेरै पटक खबर गर्‍यौं तर प्रहरीले वास्तै गर्न छाड्यो।'
०६८ सालमा भैरहवाको शुभलक्ष्मी ज्वेलर्समा चोरी भयो। चोरले करिब डेढ करोडको सुनचाँदीका गहना लग्यो। व्यवसायीहरुले चोर पक्रिनका लागि प्रहरी प्रशासनसँग धेरै हारगुहार मात्रै गरेनन् आन्दोलनसमेत गरे। तर अहिलेसम्म चोर पक्रिन सकेको छैन। उक्त पसलका सञ्चालक दीपक कौशल भन्छन्, 'न चोर पक्रियो न त कुनै सुरक्षा प्रबन्धमा कुनै सुधार भयो।'
०७० सालमा भलबाडीमा रहेको पर्वत महेश्वर सुनचाँदी पसलमा ६० लाख मूल्य बराबरको चोरी भयो। उक्त पसलमा चोरी गरेको अरोपमा प्रहरीले भारतीय नागरिक पप्पुप्रसाद शाहलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो। तर अदालतले उसलाई सफाइ दियो।
रूपन्देहीका मुख्य सहरमा सुनचाँदीका पसल सञ्चालनमा छन्। अन्य पसलमा भन्दा सुनचाँदी पसलमा लकिङ प्रणाली बलियो हुन्छ। तर पनि चोरहरुले चोरी गरेर सहजै भाग्ने गरेका छन्। अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा जिल्लामा करोडाैं रकम बराबरको सुनचाँदीको गरगहना चोर्नेहरु पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
निजी क्षेत्र आक्रोशित
चोरीको घटना बारम्बार दोहारिरहने तर चोर भने पक्राउ नपरेपछि यतिबेला सुनचाँदी व्यवसायी मात्रै होइन सिंगो निजी क्षेत्र आक्रोशित भएको छ। सुनचाँदी व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष एमबी विश्कर्माले भने, 'व्यवसायीको सुरक्षा गर्न नसक्ने राज्य के राज्य ? हामी चोरी कार्यमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी क्षतिपूर्ति दिन राज्यसँग माग गर्दछौं।'
तुलानात्मक हिसाबले सुरक्षित ठानिएको बैंकरोडमा एकाबिहानै चोरी हुनु व्यवसायीका लागि सुरक्षा चुनौती भएको भन्दै तत्काल सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र चोरी कार्यमा संलग्नलाई पक्रन सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले भने, 'भैरहवाको बैंकरोडमा सुरक्षा हँुदैन भने अन्यत्रको के कुरा ? प्रहरी गम्भीर भएर सक्रियतापूर्वक लागोस्।' सिद्धार्थ नगर सुनचाँदी व्यवसायी संघले रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चोरी कार्यमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही नगरे व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। संघका अध्यक्ष प्रकाशमणि विश्वकर्मा भन्छन्, 'पटकपटक चोरी हुँदा पनि चोर पक्रिन नसक्नु प्रहरी प्रशासनको लाचारीपन हो।'
सुरक्षाका लागि सिसिटिभी
जिल्ला प्रशासन कार्यलय रूपन्देहीमा बसेको सर्वपक्षीय भेलाले जिल्लाका मुख्यमुख्य सहरमा तत्काल सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्ने निर्णय गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेका अनुसार सुरक्षा मजबुत बनाउन सिसिटिभी क्यामेरा जरुरी रहेकाले तत्काल जडान गर्ने गरी व्यवसायीसँग छलफल गरी निर्णय गरिएको बताइन्।
पहिलो चरणमा सिद्धार्थनगर भैरहवामा सिसिटिभी क्यामेरा जडान हुनेछ। त्यसका लागि सर्वपक्षीय बैठकले सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समिति सदस्यमा सिद्धार्थ नगरपालिकाका गणेशबहादुर क्षेत्री, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका जनक थापा, बैंर्कस क्लबका रामराज उपाध्यय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कर्णबहादुर गाहा, उद्योग व्यपार संगठनका नारयण भण्डारी, गैसस प्रतिनिधि ज्ञानु पौड्याल र निजी विद्यालय सञ्चालकबाट प्याब्सनका विष्णु पन्थी छन्।
१ बाँस्कोटाको हातमा थिए एक खर्बका सात प्रोजेक्ट
२ छिङहाई प्रान्तका सबै कोरोना संक्रमित घर फिर्ता
३ पाँच दुर्घटनामा पाँचजनाको मृत्यु
४ दिदीबहिनी कप भलिबलको फाइनल स्थगित
५ लनटेनिस खेलाडी इन्डोनेसियातर्फ